Ziziphi iindlela ezingcono zokufumana amagama angundoqo ama-Amazon?
Ukuba uqhuba ishishini lakho kwi-Amazon, kubalulekile ukuqhuba uphando olunzulu lwegama elingundoqo. Unomxholo ophezulu ophando owufumanayo, ophakamileyo uya kubeka i-Amazon SERP kunye ne-intanethi yezithuthi eziya kutsala. Ukutshala ixesha lakho lokuvavanya imigaqo yokukhangela efanelekileyo kwi-niche yakho inokukwazi ukukhulisa ubungakanani boshishino lwakho kwaye uphakamise izikhundla zakho zeemveliso kwiimigaqo ekhangelwe kakhulu kwi-Amazon. Nangona kunjalo, akwanele nje ukufumana okufanelekileyo kwimigqaliselo yezoshishino lakho; Kwakhona kufuneka usebenzise izicwangciso zobuchule. I-Amazon ikunika eli thuba.
Kukho ubuncinane amaqendu amathathu apho ungafaka khona amagama akwiihloko ezijoliswe kuyo-isihloko, inkcazo kunye neengongoma zebhola. Zonke ezi zinto zibalulekile kwamanye amandla, kodwa into ebaluleke kakhulu nangaphantsi kweloluhlu lubhalwe kwisihloko somkhiqizo. Unamandla amanqanaba amanqanaba okubeka uluhlu. Ukuba unesihloko esithengiweyo segama eliphambili, uza kukwazi ukubeka uluhlu lwemibuzo emininzi yokukhangela. Mhlawumbi uye wathetha uluhlu lwemveliso ngegama elide kunye negama elingundoqo elifakwe kwiimveliso ze-Amazon. Njengomthetho, ezo zihloko zibeka bhetele kwi-Amazon kunokuba zifutshane kwaye zichanekileyo. Apha siyakubona umehluko omkhulu phakathi kwee-Amazon kunye neenkcukacha ze-Google. Ngethuba kwi-Google isihloko sakho kufanele sichaze ngokucacileyo kwaye sichaze i-website yakho eyona nto ingundoqo, kwi-Amazon isihloko sakho sinika ulwazi oluninzi malunga nemveliso yakho ngokunokwenzeka. Abasebenzisi abaqhelekanga njengezivakalisi ezide, kodwa i-Amazon A9 i-algorithm inokufumana ixabiso kuyo. Ngoko, ngezihloko ezizityebi zegama elingundoqo, iimveliso zakho ziza kubhalwa kwiimfuno ezahlukahlukeneyo zophando.
Nangona kunesidingo esikhulu, kuyisiqingatha semfazwe. Ukuba ungathanda ukufikelela kwisikhundla esiphakamileyo kuyo nayiphi na imigqaliselo yokukhangela, ukuthengiswa kufuneka kuqhutywe ngoluhlu lokubonisa i-Amazon ukuba uluhlu lwemveliso yakho lufaneleke kakhulu kule migaqo yokuphenya. Yingakho kweli nqaku siza kuxubusha indlela yokwenza uphando lwegama elingundoqo ngeendlela zobuchwepheshe kwaye wenze ukuba uluhlu lwakho lwe-Amazon lunempumelelo kangako..
Uphando lwegama eliphambili le-Amazon kunye nokulungiswa kohlu
Ngokomlinganiselo wolwazi, isithathu salo lonke uphando lwemveliso luqala kwi-platform ye-Amazon yokuthengisa. Liyindawo ekhuphisana kakhulu nekhuphisanayo nezigidi zeemveliso ezahlukeneyo. Yingakho akuyona indawo ephambili yokukhangela kwaye ufumene iimveliso ezintsha. Uphando lwe-Amazon ulindele ukuba iziphumo ezikhawulezileyo kwimibandela eluhlu lweemveliso ezifanelekileyo kunye ezifanelekileyo. Yingakho kubalulekile ukuvela phezulu kwoluhlu xa abathengi bakho banokukhangela nayiphi na ibinzana ehambelana nemveliso yakho.
Imigaqo emininzi engundoqo inokukunceda ukuba ube nomgangatho ophezulu kwiziphumo zophando ze-Amazon, kubandakanya ubungakanani kunye nomgangatho wokuvavanya kwakho, umlando wakho wokuthengisa we-Amazon, inani lezinto ezilungileyo, ukulinganisa iinkwenkwezi, inkxaso yenkxaso yabathengi, kunye nendlela efanelekileyo ngayo imveliso yakho. kumbuzo wokukhangela. Nangona uninzi lwale miba idinga ixesha kunye nemigudu ebonakalayo, ukulungiswa kwe-Amazon ukulungiswa kwangoko kunokukhawuleza kulawulo lwakho.
Indlela yokufumana amagama angundoqo kwi-Amazon ukubeka uluhlu lwezinto ezifanelekileyo?
Kukho iindlela ezithintekayo zokufumana amagama angundoqo afunekayo okufuneka uwafake kulo uluhlu lwakho ukuze ukwandise ukuhambelana kwakho kwimibuzo efunwa ngokuqhelekileyo.
Kukho iindlela ezimbini zokuqhuba uphando lwegama elingundoqo - ngesandla nangokuzenzekelayo. Uhlobo lokugqibela luyasetyenziswa kakhulu kwiintsuku zethu kuba lusindisa ixesha elihle kwaye linika iziphumo ezichanekileyo ngokusekelwe kuphando olunzulu lweemarike kunye nohlalutyo lokuncintisana.
Yingakho ndikucebisa ukuba ukhethe isofthiwe esisebenza ngokuzenzekelayo ngokusebenza ngokuphumelelayo kwiphulo lakho lokuphucula i-Amazon. Ukususela kwizixhobo zokuphanda ngegama elingundoqo, ndiyakwazi ukubalula ezi zilandelayo - Umcwangcisi wegama elingundoqo le-Google, uMcwangcisi wegama elingundoqo le-Amazon kunye ne-Jungle Scout.